Falastiin: Fatax iyo Xamaas oo heshiis wada gaaray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Falastiin: Fatax iyo Xamaas oo heshiis wada gaaray
Falastiin: Fatax iyo Xamaas oo heshiis wada gaaray
October 12, 2017 - By: HORSEED STAFF
Ururada kala maamula dhulka Falastiin ee Fatax iyo Xamaas ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis ku gaareen wadahadalkii uga socday magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Hogaamiyaha Xamaas Ismaciil Haniya ayaa saaka qoraal uu soo saaray ku sheegay in lagu guuleystay wadahadalkii Qaahira, iyadoo la filayo in maanta duhurnimadii la shaaciyo qodobada ay ku heshiiyeen dhinacyadaasi is hayey tan iyo sanadkii 2007.
Xamaas ayaa ka talisa dhulka Gaza halka Fatax oo ah maamulka caalamka ictiraafsan yahay ay ka taliso Daanta Galbeed. Maamulka Madaxweyne Maxamuud Cabaas ee fadhiya Ramallah ayaa horey xayiraad u saaray maamulka Xamaas ee GAZA.
Ururka Xamaas oo sanadihii lasoo dhaafay cadaadis weyn saarnaa isla markaana laga xiray xaduudii uu la wadaagay wadanka Masar, ayaa ogolaaday in heshiis ay la galaan maamulka Maxamuud Cabaas ee Fatax.
Heshiiska la hadal hayo ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay in Xamaas maamulka Gaza ay hoos geyso maamulka Maxamuud Cabaas, balse waxaa weli su’aalo ka taagan tahay cida la hoos geyn doono ciidamada ay sida gaarka ah u leedahay Xamaas.
Waxaa kaloo kamid ah qodobada sida weyn looga doodayey cida maamuli doonta xaduuda u dhaxeysa Gaza iyo Masar oo ay dooneyso Xukuumada Maxamuud Cabaas in iyada lagu soo wareejiyo.
Itoobiya oo 20 sano kadib safiir u magacawday dalka Eritrea
Turkiga oo laga qaaday xaaladdii deg-dega ahayd ee saarnaa
Ethiopian Airline oo duulimaadkii ugu horeeyay ku tagtay magaalada Asmara-Video
Safaaraddii Eritrea ku lahayd Addis Ababa oo dib loo furay
Xulka Faransiiska oo ku guuleystay koobkii Adduunka